पत्रकार अजयबाबु भन्छन- गलत आ’रोप लगाउने रोशनी स’जायको भागिदार बन्ने कि नबन्ने ? – Khabarhouse
पत्रकार अजयबाबु भन्छन- गलत आ’रोप लगाउने रोशनी स’जायको भागिदार बन्ने कि नबन्ने ?
Khabar house | ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १५:४१ | Comments
काठमाडौं। ब’लात्कार प्रयासको अ’भियोग लागेका कृष्ण बहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएपछि अजयबाबु शिवाकोटी भन्छन्– ‘अदालतको फै’सला पनि मेरा लागि त्यस्तै समाचारको विषय हो, जसरी रोशनी शाहीले कृ’ष्णब’हादुर म’हरालाई लगाएको आ’रोपलाई मैले समाचार बनाएँ । म’हरा माथि लागेको अ’भियोगका दुई सू’त्रधार थिए– रो’शनी शाही र अजयबाबु शिवाकोटी ।
अजयबाबु हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक तथा नेपाल प्रेस यु’नियनका महासचिव हुन्। १४ अजोज २०७७ का दिन हाम्रा कुराका लागि अजयले रो’शनी शाहीसँग लिएको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो।त्यो अन्र्तवार्ताले मुलुकमा भु’ईंचालो नै ल्याइदियो। अन्तर्वार्तामा रोशनी को दा’वी थियो– सभामुख कृ’ष्णब’हादुर म’हराले मलाई ब’लात्कार गर्न खोजे ।भोलिपल्टै म’हराले सभामुख प’दबाट रा’जीनामा दिनुपर्‍यो ।
त्यसपछि उनी निरन्तर थु’नामा थि’ए। म’हराले आज अदालतबाट स’फाई पाएपछि अजयबाबुलाई ‘जिल्ला अदालतको फै’सला कस्तो लाग्यो ?भन्दा ’जवाफमा अजयले भने– ‘अदालतको फै’सला सबैले मान्नुपर्छ । कृ’ष्णब’हादुर म’हरा मेरा वि’पक्षी होइनन्, न म उनको प’क्षको हूँ । म’हरा या राे’शनी शाही काेहीकसैसँग मेराे अ‌ा’ग्रह पू’र्वाग्रह केही पनि छैन ।
पत्रकारिता क’र्म गर्ने क्रममा उनीसँग गाँ’सिएको अन्तर्वार्ता र समाचार मैले गरें । कुरा त्यही हो ।’ लोकतन्त्रमा अदालतको फै’सला चु’नौतीरहित हुने भन्दै उनले फै’सलाको सामाजिक प्र’भावबारे भने प्र’शस्त च’र्चा गर्न सकिने बताए । उनले भने– ‘फै’सलाको पूर्ण पाठ आएपछि त्यसमा ब’हस छ’लफल गर्न सकिएला तर अदालतको फै’सलालाई नै चु’नौती दिने काम कसैले गर्न हुँदैन ।
‘‘अदालतले महरालाई स’फाई मात्र दिएको हो कि आ’रोप लगाउने रोशनीजीको बारेमा पनि केही भन्यो ? अदालतले के भनेको छ रोशनीको बारेमा ? यो पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ’– उनले भने। ‘अदालतले महरालाई नि’र्दाेष सावित गरेपछि आ’रोप लगाउने रो’शनी शा’हीजीको बारेमा पनि केही भन्नुपर्ने हो । रो’शनीजीको आ’रोप पछि नै म’हराजीलाई मु’द्दा लागेको हो, उहाँको सभामुख प’द पनि गएको हो’
अजयबाबुले अगाडि भने– ‘फै’सलाको पू’र्णपाठ आएपछि आगामी दिनमा साामाजिक ब’हस र स’मीक्षा गर्न सकिएला । तर, कसैले कसैलाई आ’रोप लगाएपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति बारेमा हाम्रो कानुन नै अ’परिपक्व छ कि ? यो पनि स’मीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ ।’रो’शनीको बारेमा अदालतले के भनेको छ भन्ने कुरालाई ग’म्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘महराजीले सफाई पाउनुको अर्थ उहाँलाई आ’रोप लगाउने रोशनी शाहीजीको दा’वी ग’लत हो भन्ने देखिन्छ । ग’लत आ’रोप लगाउने रो’शनी शा’ही स’जायको भा’गिदार बन्नु पर्ने हो कि होइन ? यो विचारणीय प्रश्न हो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी यसबारे थ’प टि’प्पणी गर्न सकिन्न’– अजयबाबुले भने । उनको भनाई छ– ‘लोकतन्त्रको प’क्षमा मेरो पत्रकारिता जा’री रहन्छ । म अझ नि’र्भिक भएर पत्रकारितामा क्रि’याशील भइरहन्छु ।’